Friday January 05, 2018 - 02:17:22 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Xogreebnews)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi, oo xilka hayey muddo saddex todobaad ah, ayaa qaaday tallaabooyin hor-leh oo u kaga daba-tagaayo hantida qaranka ee siffaha aan tudhaalaha lahayn loo iibiyey, isla markaana ah hantida ma guurtada ah ee Dawladdu leedahay.
Waxanay shacabka reer Somaliland si weyn ugu boggaadinayaan Madaxweynaha cusub Muuse Biixi, tallaabada uu ku joojiyey Saldhiga Mileteri iyo soo celinta Dhulka Raasiga Dekedda Berbera, oo shaqsiyaad Kamid ahaa Xukuumadii Axmed Siilaanyo mulkiyado ugu samaysteen badhna Iibiyeen.
Goobaha Bulshaddu ku kulanto ee suuqyada iyo meheradaha iyo weliba baraha bulshada, ayaa shacabku si mug iyo miisaan leh ugu boggaadiyeen Madaxweyne Muuse Biixi labada tallaabo ee u qaaday dhulka Raasiga Dekedda ee u soo celiyey iyo saldhiga Mileteri ee u hakiyey. Shacabka Somaliland ayaa labada tallaaboba si mug iyo miisaan leh ugu mahadnaqay Madaxweynaha qaranka Md. Muuse Biixi.
Sidoo kale, Shacabweynaha, ayaa geesiyo qaranka oo daacad ah ku tilmaamay Maareeyaha Dekedda Berbera Eng. Siciid Xasan Cabdilahi iyo Wasiir hawlaha guud iyo dhulka Md. Cabdirashiid qambi, kuwasoo ay shacabku iyaggana ku boggaadiyeen inay si daacadnimo leh oo qaranimo ku jirto, ay Madaxweynaha ugala shaqeeyeen soo celinta dhulka Raasiga Berbera, ee Madaxweynuhuu wareegtada kusoo celiyey.
Sidaas daraadeed shacabka Somaliland, waxa ay galeen jawi farxadeedo, kuwasoo aaminsan inay maanta dhalatay Xukuumad shacabka la dareen ah oo badbaadineysaa, hantida umada, isla markaana Dib gacanta shacabka ugu soo celinaysa wixii siffo khaldan Xukuumadihii hore ay u iibiyeen, sida dhulal tiro badan iyo guryo dawladdu leedahay oo la Iibiyey.